J: Food - Carrot Hand- လက်နီကြီးလာပြီ
အယ် ရုတ်တရက် ကြည့်လိုက်တော့ သိုးမွှေးတွေ အောက်မေ့လို့ ။ စာဖတ်ကြည့်လိုက်မှပဲ သိတော့တယ် မုန်လာဥနီမှန်း။ :D အဲ ကြုံလို့ မုန်လာဥက အမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ မုန်လာဖြူ၊ မုန်လာနီ၊ နောက် ဘာမုန်လာတွေ ရှိသေးလဲဟင်??? အင်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်နီကြီးကို စားလိုက်ရလို့ကတော့ ရှလွတ်...!!!
ကျနော်တွေ့ ဖူးတဲ့ မုန်လာဖြူမှာတင် ၂မျိုးရှိပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေး ပညာ အဆင့်မြင့်တော့ မူရင်း မျိုးစေ့ကို နည်းပညာတွေ နဲ့မျိုးစေ့သစ်တွေ ထွင်ထားပါတယ်။ သိချင်ရင် နောက်ပို့ စ်တွေ မှာ အဆင်သင့်သလို တင်ပေးပါမယ်။